बगैचा पूल समीक्षाहरू - सम्पादकहरूको सिफारिसहरू
सुरु बगैचा बगैचा आराम बगैचा पूल
यो भनिन्छ बगैचा पूल एक खनिज जल बेसिन हो जो कि एक निश्चित स्विमिंग पूल को तुलना मा सानो छ, तर फिर भी एक अद्भुत ठंडा र गर्म दिनों मा रिकवरी को लागि प्रदान गर्न सक्छन्। विशेष गरी बच्चाहरु घर मा आफ्नो आफ्नै स्विमिंग पूल राख्न उत्साहित छन् र वयस्कों को पनि एक कम समय को लागी प्रशंसा गर्छन कि तपाईं सार्वजनिक सुविधाहरु मा काम गर्न को लागी तल काम गर्न को लागी ठंडा छैन।
शर्तहरू अन्तर्गत बगैचा पूल, स्थापना पूल वा पूर्वनिर्मित पूल त्यहाँ यस खुशीको विभिन्न किस्महरू छन्, जुन हामी यहाँ फोकस गर्न चाहन्छौं।
1 बगैंचाको पूल के हो?
2 त्यहाँ कस्ता किसानहरू छन्?
3 यस स्ट्रोफाम बगैचा पूल
4 द्रुत माथि बगैचा पूल
5 एक बगैचा पूलको रूपमा पलिएस्टर पूल
6 बगैचा पूल स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ
7 Framepool एक बगैचा पूल जस्तै
8 बगैचा पूलको यी प्रकारहरू उपलब्ध छन्
8.1 राउन्ड आकारमा बगैचा पूल
8.2 बाहिरी स्विमिंग पूल ओवलको रूपमा
8.3 बगैंचा पोखरी एक आठ को रूप मा
9 बगैचा पूल निर्माता
10 बगैचाको लागि बिक्री: फचन्देल बनाम मा-लाइन
11 सिफारिश गरिएको बगैचा पूल
12 बगैचा पूलको इतिहास
13 बगैचा पूल मालिकको लागि कानूनी
14 बगैचा पूलको लागि पानी खर्च
15 बगैचा पूल सफा गर्नुहोस् र सफा राख्नुहोस्
16 बगैचा पूलको लागि फिल्टर प्रणाली
16.1 बगैचा पूलको लागि कारतूस फिल्टर
16.2 बगैचा पोलको लागि बालुवा फिल्टर प्रणाली
16.3 सम्बन्धित बगैचा पूल को लागि कुन फिल्टर प्रणाली सही छ?
17 बगैचा पूलको लागि रासायनिक additives
18 उपयोगी बगैचा पूल उपसाधन
19 बगैचा पूलमा निष्कर्ष
के हो बगैचा पूल?
der बगैचा पूल एक पूर्वनिर्मित बेसिन हो, जुन सेट अप गर्नु पर्छ र त्यसपछि पानी संग भरिएको छ। हाम्रो अक्षांशमा यो गर्मीमा मात्र प्रयोग गर्न सिद्धान्त हो, जसको कारण एक क्यान्सर आदि संग सम्भव हुन सक्दछ। स्नान मौसमको विस्तारमा पुग्न सक्छ। मोडेलमा निर्भर गर्दछ, पूलले विभिन्न आधारभूत सामग्री वा स्थापना भिन्नताहरू समावेश गर्न सक्छ, तर सधैं स्थिर स्थिर फिल्म हो जुन भित्र भित्रिएको पानी। यसको अतिरिक्त, एक निश्चित पूल संग विभिन्न सफाई र निस्पंदन प्रणाली को आवश्यकता हो।
बगैचा पूलको लाभ
तपाईंको आफ्नै सम्पत्तिमा कुनै पनि समयमा ताजा हुने सम्भावना
कसैले बाटोलाई ताल वा स्विमिंग पूलमा सुरक्षित गर्छ
नुहाउने बेला वा अजनबारीहरू बाँकी
कुनै पनि समय उपलब्ध छ, यदि तपाईं तैरना चाहानुहुन्छ, रात सम्म पनि
बगैचा पूलको हानिकारक
सधै पुनर्निर्माण र ध्वनीकरण हुनुपर्छ, जुन समय र श्रमको लागत
क्यारियरले लगातार मौसम प्रयोग गर्नुपर्दछ, जुन पूलमा प्रयोग हुन सक्दैन
जो बगैचा पूल प्रजाति त्यहाँ छ?
बगैचामा स्नान मजाको लागि अब विभिन्न सम्भावनाहरू छन्। परिस्थिति र बजेटको आधारमा तपाईं एक किसिमको हेर्न सक्नुहुन्छ बगैचा पूल , जहाँ हामी पनि "सजिलै" पोस्ट गरिएको, तर निश्चित होइन सूची सूची हुनेछ।
शॉल संग स्ट्रोरोम
द्रुत अप पूल
इस्पात पर्खाल पूल
der पोलीट्रीन बगैचा पूल
यस प्रकारको पूल समावेश गरिएको क्युबाइडहरू समावेश छन्, विशेष, कम्पैक्ट पोलीट्रीन तयार हुन सक्छ। यी जिब्रो र नालीसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ र पन्नीको साथमा राखिएको छ। स्ट्रोरोफाम ब्लकहरूको कारणले राम्रो कट , हरेक अवधारणात्मक आकार र आकार डिजाइन गर्न सकिन्छ।
एक सरल प्रणाली जस्तै निर्माण किरा
बेसिन पर्खालहरू एक राम्रो हुन्छन् इन्सुलेशन ठंड मैदानको विरुद्ध
फ्लोरिंग कंक्रीटमा आवश्यक
स्ट्रोफाम ब्लकहरू कंक्रीटसँग भरिनै पर्छ
सापेक्ष महंगी: लगभग 4.000 यूरो बाट उपलब्ध
der द्रुत अप गार्डन पूल
यो भनिन्छ द्रुत अप गार्डन पूल स्थिर फिल्मको समावेश छ। पानी भर्ती हुँदा यो यो हुन्छ। माथिल्लो किनारा पनि बन्द छ फिलिम - एक रिंग जो भरने को शुरुवात मा हावा संग फ्रिज गरिएको छ। यसले माथि उठाउँछ र पूल स्थिर राख्छ। यो प्रकारको पोखरी घाँस वा बालुवामा राख्न सकिन्छ; यो मात्र निश्चित हुनुपर्छ कि जमीन सहि छ र कुनै ढुङ्गा छैन। ड्रिल मार्फत पूल। यसको अतिरिक्त, ए सुरक्षाको लागि फोकस पैड। यसको अतिरिक्त, सब्सट्रेट फर्म वा कम्पैक्ट हुनुपर्छ, किनकी वजन काफी छ।
द्रुत सेट-अप र समाप्ति
आवश्यक जमीनको कुनै महान तैयारी
धेरै सस्तो (अनुमानबाट उपलब्ध 50 यूरो)
अधिलेखन गर्न सकिँदैन, विच्छेदन हुनुपर्छ
अत्यधिक स्थिर हुँदैन, पर्खालले अपेक्षाकृत संवेदनशील संवेदनशील छ
एक पलिएस्टर बेसिन जस्तो बगैचा पूल
पूल मा एक पूर्वसूचित छ रेशा पूल, यानी ग्लास फाइबर को बने प्रबलित प्लास्टिक को बने। यो पूर्वनिर्मित डेलिभर गरिएको छ र अघिल्लो उत्खनन गड्ढामा राखिएको छ। पक्षका पर्खालहरु कंक्रीटका साथ खसाल्दै छन्।
लगभग कुनै पनि फारम सम्भव छ
निर्माण प्रयास उचित छ
जाडोमा विमोचन गर्न आवश्यक छैन
मरम्मत जटिल छ
वितरणको लागि, क्रेनको लागि ठाउँ हुनुपर्छ
अनुमानित 4.000 यूरो बाट महंगा
der बगैचा पूल स्टेनलेस स्टील बाट बनाइएको
स्टेनलेस स्टील ट्यांक अत्यन्त टिकाऊ र स्वाभाविक रूपमा आकर्षक रूपमा उपस्थित छन्। डिजाइन अपेक्षाकृत लचीला छ, किनभने पर्खालहरू पूर्वनिर्मित छन्, तर विभिन्न तरिकामा सँगसँगै राख्न सकिन्छ। तथ्याङ्क स्वयं आत्म-समर्थित पर्खालहरू सामान्यतया उठाइन्छन्, जहाँ कुनै कंक्रीट ब्याकफिलिङ आवश्यक पर्दछ। पर्खालको भागहरूमा सामेल हुन, यो वेल्ड गर्न आवश्यक छ। यद्यपि, यस प्रकारको बगैचा पूल सबैभन्दा महंगी, किनभने यहाँ मूल्यहरू 10.000 यूरोको आसपास सुरु हुन्छ।
धेरै राम्रो सतह
निर्माणको क्रममा राम्रो भिन्नता
सेट अप गर्दा वेल्डर आवश्यक छ
सीजनमा सुरुवात जटिल सफाई आवश्यक छ
Framepool एक बगैचा पूल जस्तै
तथाकथित फ्रेम पूल एक इस्पात निर्माण हो जसले विभिन्न आकारहरू सम्भव बनाउँछ। यो गर्न स्विमिंग पूल लाइनर , त्यस पछि जो जमीन मा भन्दा जमीन मा कम छ इस्पात निर्माण निर्भर गर्दछ।
धेरै साइज र आकारहरू सम्भव छन्
तह सतहमा स्थिर स्ट्यान्ड
पहिले नै अपेक्षाकृत सस्तो छ
सेट अप गर्न सजिलो छैन
साइड पर्खालहरु अपेक्षाकृत अस्थिर
मर्न बगैचा पूल, किनभने तिनीहरू यहाँ व्यवहार गरिन्छन्, जुन संरचनात्मक उपायहरू बिना कुनै पनि समय सेट अप गर्न सकिन्छ, केवल यी 2.2 अन्तर्गत। र 2.5। नामित। अन्य सबैलाई आवश्यक निर्माण उपाय चाहिन्छ।
यी फारमहरू बगैचा पूल त्यहाँ छ
मर्न बगैचा पूल विभिन्न रूपहरूमा उपलब्ध छन्। राउण्ड बेसिन सबैभन्दा साधारण हो, किनकि यस प्रकार को निर्माण स्व-समर्थन हो र यसैले कुनै पनि समर्थन आवश्यक छैन।
बगैचा पूल राउन्ड आकारमा
कम्पैक्ट आकारको कारण, स्पेस आवश्यकता अपेक्षाकृत कम छ, त्यसैले सानो धेरै पनि सम्भव पाइन्छ। त्यो हो राउन्ड पूल पर्याप्त (ठूलो 4-5 मिटरको व्यास देखि), सर्कलमा राम्रोसँग तैर्न सक्छ। यसैले यो केवल splashing को लागि छैन, तर एक ठूलो पूल जस्तै हुन सक्छ, जो अधिक लम्बाई को पेशकश गर्दछ, तैरने को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बगैचा पूल ओवलको रूपमा
ओवल बेसिन तर जमीनमा पूर्ण रूपमा हराउनुपर्दछ वा समर्थनको साथ प्रदान गरिएको हुनुपर्छ, किनकि स्थिरता फारम द्वारा दिइएको छैन। यदि ओवल पर्याप्त छ भने, तर तपाईले यहाँ लाइनहरू तैर गर्न सक्नुहुन्छ।
बगैचा पूल जस्तै आठ
यदि तपाइँ यसलाई माया गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एकमा जानुहुन्छ बगैचा पूल आठको रूपमा। यो लगभग दुई राउन्ड बेसिनको जडान हो, तर तिनीहरूसँग लामो तराईको फ्याँकिलो फ्याँक हो। स्थिरीकरणको लागि, एक स्टील निर्माण आवश्यक छ, किनकि स्थिरता यहाँ द्वारा दिएको छैन।
मर्न बगैचा पूल निर्माता
मर्न बगैचा पूल विभिन्न निर्माताहरू द्वारा प्रस्तावित छन्। हामी यीमध्ये केही उल्लेख गर्न चाहन्छौं, जुन विशेष गरी हो र जसका पूलहरू सबैभन्दा लोकप्रिय हुन्छन्। त्यहाँ कल गर्न सबै इन्टेक्स हुनेछ, जो पहिलो थिए, द्रुत अप पूल बजारमा। Intex Easy Set Quick Up Pools सँग एक राम्रो प्रकृया गुणस्तर छ। तिनीहरू सेटको रूपमा उपलब्ध छन् तर व्यक्तिगत भागहरूमा पनि उपलब्ध छन्। यसको अतिरिक्त, Framepools कम्पनी द्वारा उत्पादित गरिन्छ, आंशिक रूपमा काठ बाह्य प्रकाशिकी अपील मा।
बन्दोबस्त पछि बेचेवे, जुन अब समान पोखरीहरू सिर्जना गर्दछ, तर फ्रेमपूलहरू पनि छन्। कम्पनीले माथिल्लो अग्रगामीलाई तुलनात्मक रूपमा युवा बनाएको छ, पहिले 90ers मा स्थापित। यो मुख्य रूप चीन मा बनाइएको छ। माथि उल्लेखित सेटहरूको समान, बेस्टवेले छिटो सेट पूल प्रदान गर्दछ, जसले उच्च गुणस्तरको साथ पनि समेट्छ। अप्टिकल भेद यो हो Intex पूल पूर्णतया नीलो हुन्छ Bestway सेतोमा मुद्रास्फीति रङ। यसको अतिरिक्त, फ्रेम पूल र इस्पात पर्खाल बेसिन उत्पादन गरिन्छ।
यसबाहेक, ग्रीसवेभ र जिलन्ग पनि उल्लेख गरिएका छन् द्रुत पूल बजारमा।
जर्मनीमा लोकप्रिय र लोकप्रिय मेरो पूलबाट इस्पात भित्री पोखरीहरू छन्। अस्ट्रियाई कम्पनीले तुरुन्तै उत्पादन गर्दछ, तर यी कम राम्रो तरिकाले चिनिन्छन्। इस्पात भित्री बेसिनहरू जस्ती हुन्छन् र धेरै राम्रो गुणसँग सहमत हुन्छन्।
हान्साटिक ओटो जीएमmbए एन्ड कं केजी के एक निजी ब्रांड हो। त्यहाँ हान्सेटिक राउन्ड पूलहरू छन्। यो विभिन्न आकारमा पीवीसी पन्नीको साथमा भित्ताका भित्ताहरू हुन्।
Intex आयताकार फ्रेम पूल सेट अप पूल - 300 x 200 x 75 सेमीडिस्प्ले
आयताकार फ्रेम पूल
बलियो र बलियो चलचित्र; उच्च स्थिरता
द्रुत र सजिलो विधान
जस्ती र पाउडर लेपित पूल निर्माण; अत्यन्त आँसु प्रतिरोधी पीवीसी कपडा
डिलिवरीको दायरा: इन्टेक्स फ्रेमेमूल परिवार परिवार 300 एक्स 200 X 75 सेमी, फिल्टर फिल्टर बिना
बगैचा पूल किन्न: विशेषज्ञ रिटेलर्स मा-लाइन
यदि निर्णय गरिन्छ कि एक पूल हासिल गर्न सकिन्छ र सम्भवतः यो पहिले नै स्पष्ट छ कि यो किसिमको हुनुपर्छ, प्रश्न यो हो कि तपाईं स्पेस वा अनलाइनमा किन्नुहुन्छ। भन्दा मौसमी सामान त्यहाँ छ बगैचा पूल धेरै निर्माण र बागवानी बजारहरूमा, इन्टरनेटमा हरेक वर्ष राउन्ड।
सेल्स सल्लाह (तर हार्डवेयर पसलहरु र डिस्काउटरहरु मा छैन)
पूल बाट तुरुन्तै लिन सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ बेचेको छ र अर्डर गर्नु पर्छ
मौसमी उपलब्धताको कारण, उपलब्धताको लागि कुनै ग्यारेन्टी छैन
इन्टरनेटमा सामान्यतया अधिक महंगा
धेरै ठूलो चयन दिइएको छ
धेरै पूर्ण प्रस्तावहरू, जहाँ कुनै सामानहरू खरिद गर्न सकिँदैन
बिना हिलाउने घर डेलिभरी
सञ्चालनमा तुरुन्तै राख्न सकिदैन
सिफारिस बगैचा पूल
हामी तपाईंलाई केहि बगैचा पूलहरूमा परिचय दिन चाहन्छौं, जुन हामीले तपाईंको लागि सिफारिस गर्दछौं:
धेरै ग्राहकहरु को राय मा राम्रो विशाल भव्य मेगा काठबर्नड स्विमिंग पूल यो5मीटर र 1,20m वरपरको गहिराइको व्यास रहेको छ, त्यसैले तपाईं वास्तवमा यहाँ राम्रो तैर ​​गर्न सक्नुहुनेछ। काठ को आवरण र स्थिरताको कारण राम्रो इन्सुलेशन हाइलाइटहरू हुन्।
सिफारिस गरिएको पनि इंटेक्स आराम स्थापना पूल आकारमा 360 सेन्टिमिटर व्यास र 91 सेमी को गहराईमा। यी अनुकूलित मूल्य र एक भन्दा बढी सिजन भन्दा बढीको लागि एक उपयुक्त स्थिरताको कारण मानिन्छन्।
राम्रो परीक्षा परिणाम पनि देखि Bestway, को आयताकार परिवार धेरै सस्तो छ। यहाँ धेरै आकारहरू छन्, स्विमिंगको लागि सबैभन्दा ठूलो।
को इतिहास बगैचा पूल
वास्तवमा, अमेरिका बाट यो विचार आउँछ। 30 वर्षमा, जब भालुगंगाले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्रियाकलापको अनुभव गरे, उच्च समाजले आफैले सुरु गरेर भीडबाट टाढाको छ। पूल उपकरण तिनीहरूको भूमिमा। मुख्यतः, तथापि, बगैंचा अपग्रेड गर्नको कारण थियो र पार्टीको लागि हाइलाइट देखाउन। बैदेन पृष्ठभूमिमा अधिक थियो।
60 वर्षदेखि, अमेरिकाको पूलहरू अब बागहरूको अभिन्न भाग थिएनन् - त्यहाँका बैंकहरू जुन विशेष पूल ऋण दिएका छन्।
विशेष गरी अन्तिम 20 वर्षहरूमा जर्मनीको रुचि पनि बढ्दो छ। एक सर्वेक्षणको अनुसार, जर्मन परिवारहरूले लगभग 700.000 को मालिक छन् स्विमिंग पूल, इस्पात भित्री बेसिनहरू, जुन सबै मोडेलहरूको 60% को लागि खाता हो, बाटोको नेतृत्व गर्दैछन्।
यसका लागि कानूनी बगैचा पूल-owners
व्यापक प्रतिक्रियाको विपरीत, सामान्य अवस्थामा यो आवश्यक छैन कि यस्तो पूल स्थापना गर्न। बरु, यो धेरै संघीय राज्यहरूमा एक पूलको लागि इजाजतपत्र परमिट आवश्यक छ केवल 100 क्यूबिक मीटर सामग्री आवश्यक छ। प्रायः माथि उल्लिखित पूलहरू धेरै कम छन्। लम्बाईमा 7-8 मिटरको एक अत्यन्त ठूलो माथिल्लो पूल र एक मीटरको गहिराइ अझै यो सीमा नजिक पुग्दैन।
मर्न बगैचा पूलको लागि पानी खर्च
निस्सन्देह, दौड लागतको उच्चतम स्थान पानी हो, जुन वर्षमा एक पटक आवश्यक हुन्छ। सामान्यतः यो बाट हो ताजा पानी पाइप र यसैले जलविद्युतको इकट्ठा गर्दछ, अपशिष्ट जल लागत समेत, घरमा निकासी पेयको पानी जस्तै। केही नगरपालिकाहरूमा यो भरने को लागि अनुमति छ बगैचा पूल एक अतिरिक्त पानी घडी स्थापना गर्न। यो मात्रा त्यसपछि परिभाषित गरिएको छ औद्योगिक पानी बगैंचाको लागि, बेकार पानी बिना। यो स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
खोरमा बगैचा पूल सफा र सफा राख्नुहोस्
der बगैचा पूल भरिएको मौसममा भरिएको हुनुपर्छ। यसको लागि, यो केही सुझावहरू लिनु भन्दा राम्रो छ त्यसैले यो कष्टप्रद र समय-उपभोग गर्ने काम हुँदैन। निम्न प्रयोग गर्नुपर्छ:
हामी अर्को अध्यायमा फिल्टर संयन्त्रलाई हेर्नेछौं। यद्यपि, अन्य बिन्दुहरू कम प्रयासको साथ कल्पना गर्न सकिन्छ। साइट बस बस हुनु हुँदैन जहाँ धेरै पेड र शरबहरू छन्। यो सौर विकिरणको कारणले सिफारिश गरिएको छैन, तर पत्तियां र टाईपले अन्यथा पूललाई ​​प्रदुषण गर्दछ, जुन एक को सही स्थापना स्थिति संग बगैचा पूल ठूलो मात्रा मा कम गर्न सकिन्छ।
आवरण पाना दुई फायदाहरू छन्: यसले प्रयोग गर्दा पानीमा पट्टेबाट पत्तिहरू र कीराहरूलाई रोक्छ, र पानीलाई रातभर ठुलोबाट रोक्छ। सेटमा बगैचा पूल, जुन तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, यी कवर सामान्यतया समावेश गरिन्छ। तिनीहरू बस पानीमा तैरन्छन्।
नेट एक लम्बाई ह्यान्डल छ, जसले पानीबाट अशुद्धता हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, यहाँ पानीमा डुब्न र त्यहाँ समस्या हुन सक्छ। यदि ल्यान्डिङ नेट नियमित रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने, यसले पानी सफा गर्दा धेरै प्रयास गर्छ।
बगैचा अनुलग्नकसँग बगैचा नली फ्लोर क्लीनरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अक्सर आपूर्तिको दायरामा समावेश छ। यस अवस्थामा, पानी भत्काउन सक्कली संलग्नकमा एउटा वैक्यूम उत्पन्न भएको छ जसले सङ्कलनको थलोमा गड्ढाउँदछ। यो बस खाली छ र ट्याट प्रयोगको लागि तयार छ।
मर्न बगैचा पूलको लागि फिल्टर प्रणाली
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागि सहायक उपकरण बगैचा पूल निस्पंदन प्रणाली हो। यस बिना पूल संचालित गर्न सकिँदैन। यही कारणले तपाइँ कि किन्न सक्नुहुनेछ पूर्ण सेटहरूमा समावेश छ।
एक दिशानिर्देशको रूपमा, फिल्टर प्रणाली यति शक्तिशाली हुनुपर्छ र त्यस लामो लामो समयसम्म चलिरहेको छ कि पानी एक दिन दुई पटक चल्छ। तदनुसार, फिल्टर प्रणालीको साइज चयन गरिएको हुनुपर्छ।
तर त्यहाँ फरक फिल्टर प्रणालीहरू छन्:
कुन पोलको लागि उपयुक्त छ र यो कसरी काम गर्दछ?
der कार्ट्रिज फिल्टरको लागि बगैचा पूल
कारतूस फिल्टर प्रणाली प्रायः आपूर्ति गरिन्छ। प्रणालीले फिल्टरको माध्यमबाट पानीलाई आकर्षित गर्छ, जुन पेपर जस्तो देखिन्छ र कार्य गर्दछ, र यसरी मोटे ग्याँस फिल्टर गर्दछ। पानी फिर्ता पूलमा सफा गरिएको छ। यसले एक सर्किट सिर्जना गर्दछ जुन घण्टाको लागि अन्तिम हुनुपर्दछ। को कारतूस फिल्टर "पेपर" को साथ केहि दिन पछि प्रतिस्थापित गर्नु पर्छ र बूढोहरुलाई सफा गरिनु पर्छ। किनकि यी कारतूसहरू पुनः पुन: पुन: खरीद गर्न सकिन्छ, थप परिणामहरू खर्च गरिन्छ, जुन उल्लेखनीय छैन। यो प्रकारको फिल्टर सानोका लागि हो बगैचा पूल ठीक; ठूलो को लागी एक रेत फिल्टर पंप को उपयोग को बारे मा सोचना चाहिए।
मर्न स्यान्ड फिल्टर प्रणाली बगैचा पूल
ठूला ट्यांकहरूको लागि, सामान्य सफा गर्ने तरिका रेत फिल्टर प्रणाली हो। यहाँ बेसिन बाहिर एक पोत हो, जुन बालुवाले भरिएको छ। अहिले प्रणालीले यस बालुवाको माध्यमबाट पानीलाई पम्प गर्छ, र त्यसपछि फिर्ता पानीमा बगैचा पूल फिर्ता। यस तरिका मा अशुद्धता रेत मा रहछन। यसरी, सबै निलम्बित कणहरू पानीबाट फिल्टर गर्न सकिन्छ।
मर्न बालुवा फिल्टर हरेक दिन केही घण्टाको लागि दौडनु पर्दछ, तर लामो समयसम्म कारतूस फिल्टर प्रणालीको रूपमा नजानुहोस्।
बालुवा फिल्टर नियमित रूपमा अन्तरालहरूमा फ्लुलो हुनुपर्दछ ताकि यसले यसको सफाई सञ्चालन जारी राख्दछ। यस स्वचालित प्रकार्य संग पानी "Verkehrtherum" रेत को माध्यम ले पठाइएको छ, यसैले गंदगी को कणहरु को रगत बाहिर छ। उनीहरू पंपको छेउतिर उभिन्छन्।
मर्न अधिग्रहण लागत रेत फिल्टर प्रणाली उच्च हो, तर पछिको लागत कम छन् र प्रदर्शन धेरै उच्च छ, त्यसैले प्रभाव राम्रो छ।
सम्बन्धित को लागी कुन फिल्टर प्रणाली उपयुक्त छ बगैचा पूल सही एक?
सानो मा बगैचा पूल एक कारतूस फिल्टर पर्याप्त छ। यदि ठूलो पूल केवल छोटो रूपमा बनाइएको छ भने, यो फिल्टरको प्रकार पर्याप्त छ। तर एउटा ठूलो बेसिन रेत फिल्टर प्रणालीसँग सञ्चालन गरिनु पर्छ। यसले उल्लेखनीय फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।
को लागि रासायनिक additives बगैचा पूल
कसैलाई केहि रुचि छ बगैचा पूल रसायन विज्ञान को बारे मा चिन्ता छ कि पानी मा दिए जान पर्छ। तर यसको धेरै सफा पानी हुनु आवश्यक छैन, र एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल भन्दा रकम भन्दा कम तीव्र छ।
एक समान संग परीक्षण स्ट्रिप्स एक सक्छ पीएच पानीको। यो7र 7,4 बीच हुनुपर्छ। सम्बन्धित ऐनाइटिभ, पीएच मान बढाउन वा कम गर्न, तरल फारममा अवस्थित छ।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो क्लोरीन हो। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि जीवाणु र जीवाणुले पूलमा बसोबास गर्दैन। यसैले, यो निरन्तर र सही मात्रामा हुनुपर्छ बगैचा पूल उपलब्ध छ। यो कसरी स्थिरता (तरल, दानेलेट), आदि मा निर्भर गर्दछ तर तर सरल तरीका क्लोरीट ट्याबलेट हो। यो एक अस्थायी कन्टेनरमा भरिएको छ, जसले यो सुनिश्चित गर्दछ क्लोरीन नियमित रूपमा र निरन्तर पानीमा। यसैले, यो सँधै सावधान रहन आवश्यक छैन, बाहेक सम्पूर्ण ट्याब्लेट भंग हुँदा बाहेक। त्यसपछि बस भर्नुहोस्। पानीको क्लोरीन मान पनि मापन गर्न सकिन्छ - यो 0,5 र 1 मिलीग्राम / एल बीच हुनुपर्छ।
आफैलाई राख्नुहोस् शैवाल वा यदि एक पूल रखरखाव लाई उपेक्षा गरेको छ, सबै केहि हराएको छैन। प्रभाव क्लोराइजेशन राहत प्रदान गर्न सक्छ। यो ठूलो मात्रामा क्लोरीनसँग गरिन्छ, यदि दाँत वाला रूपमा सम्भव भएमा।
उपयोगी आउटडोर पूल उपसाधन
उपयोगी सहायकको रूपमा सिफारिश गरिएको छ:
निर्वात सफाई संलग्न
क्लोरीट ट्याब्लेटहरूको लागि स्किमर
सम्भावित पूल ताप
विषयमा निष्कर्ष बगैचा पूल
एक बगैचा पूल सबै ल्यान्डियर्स / भाडाका लागि राम्रो खरिद हो कि गर्मीमा गर्मीमा आराम र गर्मीमा ठुलो ठोक्कियो। बच्चाहरु को लागि, उहाँले तैरने को लागि सीखने को लागि आदर्श अवसर प्रदान गर्दछ, किनकी अक्सर किनकि प्रबंधन योग्य क्षेत्र को पानी देखि कम डर छ।
तथापि, यो संधै ग्यारेन्टी हुनु पर्छ कि बच्चाहरु संग एक परिवार मा उनि पूल को लागि अपरिपक्व छैन, किनकी सीढी पनि छिटो छ कि पूल मा बच्चाहरु, जो अझै तैरने छैन।
पूल को प्रकार र साइज मा निर्भर गर्दछ, सेट अप मा शामिल प्रयास कम वा उच्च छ र मूल्य धेरै भिन्न हुन्छ। सबैले एक निर्णय गर्नु पर्छ। सायद एक सानो द्रुत-अप पूल शुरुवातकर्ताको लागि सही चीज हो भनेर जाँच गर्न को लागी कि उच्च-गुणस्तरको पूलको खरीद सार्थक छ कि छैन। यसबाहेक कुन मोडेल हो, गर्मीमा फ्रिज सामान्यतया एक आनन्द हुन्छ, जसबाट कसैले फेरि फेरि छोड्न र कुन चाँडै आदी लगाउन चाहँदैनन्।
तथापि, यो स्पष्ट छ कि, तपाईंले पूल को बनाए राख्न को लागि एक निश्चित समय लगाउनु पर्छ। अन्यथा, पानी गहिरो हुन्छ र ब्याक्टेरिया र रोगको लागि कोठा प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यदि सबै तदनुसार सेट अप गरिएको छ भने प्रयास सीमित छ।
महत्त्वपूर्ण हुन अझै महत्त्वपूर्ण छ कि एक बगैचा पूल, जो जाडोमा टाढा जान पर्छ, सँग एक निश्चित ठाउँको आवश्यकता पनि छ। विशेष कंडक्टर, फिल्टर प्रणाली र मनपरी व्यक्तिगत भागहरूमा फिर्ता कटौती छैन र त्यसैले सानो ठाउँ चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग अवसर छ भने पूलको नजिकै सबैभन्दा राम्रो ठाउँ एक सानो हो बगैचा SHED, त्यसैले उसले चीज को लागि पूल को भण्डारण गर्न सक्छ। साथै क्लोरीन ट्याब्लेटको यहाँ राम्रो तरिकाले भण्डार गर्नुहोस्, किनकी यी फिल्मको बावजूद एक बलियो गन्ध छ, जुन अन्य शेड वा सेलर्समा वांछित हुनु हुँदैन।
यदि यो सबै खातामा लिइन्छ भने, घर मा स्नान मजा रोक्न केहि पनि छैन, विशेष गरी हट दिन आफ्नै आउटडोर पूल आराम र लामो पैदल सार्वजनिक स्नान को लागि चलाउछ।
इंटेक्स पूल पूल Ø 366 एक्स 99 सेमी फ्रेम पूल सेट प्रवाद Rondo 26716 सूचक
90 मा पानीको सामग्री% भरिएको: 8.592 एल
फिल्म मोटाई फ्लोर 0,32 मिमी; फिल्म मोटाई पर्खाल 0,55 मिमी
कारतूस फिल्टर प्रणाली 604G, 2.271 एल / एच INTEX पानी पुनजाजाकरण प्रविधि संग
हटाउन सकिने कदमहरू, अधिकतम सुरक्षा सीढी। 136 किलो लोड गर्नुहोस्
इंटेक्स 366x122 सेमी तरण ताल तरणताल तरणताल फ्रेम धातु 28904 सूचक
366x122 इन्टेक्स "फ्रेम" प्रतिस्थापन पूल
नेवी ब्लूमा इंटेक्स नवीनता सीजन २०२०
कुल मा, बेसिन 10.685 पानी (90% भरेर भरिएको)
निर्माण समय अनुमान। 30min
इस्पात ट्यूब फ्रेमवर्क स्थिरता र लामो जीवन सुनिश्चित गर्दछ।
इंटेक्स ग्रेफाइट ग्रे प्यानल पूल सेट - प्यानल वाल पूल - धेरै विलासी र कडा - Ø 478 x 124 सेमी - एक्सेसरीहरू समावेश सूचक
Incl। 220-240V बालुवा फिल्टर पम्प
Incl। सुरक्षा भर्या।, आधारभूत पोशाक र आवरण
90% मा पानी क्षमता
काठको दृश्यमा उच्च गुणस्तरको प्लास्टिक बाहिरी भित्ताहरू
इन्ट्याक्स इजी सेट पूल - माथिको मैदान पूल, 396 84 सेमी x cm 74 सेमी x XNUMX XNUMX सेमी
छिटो र सजिलो स्थापना
बलियो र बलियो पन्नी
कुनै सामानहरू समावेश छैनन्
बेस्टवे पावर स्टील फ्रेम पूल पूर्ण सेट, गोलाकार, झुण्डिएको स्किमर / फिल्टर पम्पको साथ, सुरक्षा भर्याder र टारपलिन 427२107 x १०XNUMX सेमी
सजिलो असेंब्ली: बगैंचा पूल सजीलो र उपकरण बिना नै सेट अप गरिएको छ र यसैले तत्काल प्रयोगको लागि तयार छ
मजबूत र स्थिर: प्रबलित ट्राईटेक सामग्री र मजबूत इस्पात फ्रेमलाई धन्यवाद, फ्रेम पूल एकदम स्थिर छ
सफा पानी: एन्टिमाइक्रोबियल फिल्टर कार्ट्रिज र स्किमरको साथ फिल्टर पम्पको स्काइमेटिक संयोजनले पौंडी पोखरी सफा राख्छ।
अतिरिक्त सुरक्षा: सुरक्षा भर्या .ले केटाकेटीलाई माथिल्लो मैदानको पूल अनसर्वेक्षित प्रवेश गर्नबाट रोक्छ
वितरणको स्कोप: बेस्टवे पावर स्टील डिलक्स स्टील फ्रेम पूल, फिल्टर पम्प र स्किमर २,2.574 l एल / एच सहित, फिल्टर कार्ट्रिज, पोखरी भर्याder र पोखरी कभर, आयाम: 427२107xXNUMX सेमी, सामग्री: ट्राईटेक, रंग: खैरो रत्तन
बेस्टवे फ्रेम पूल स्टील प्रो, फिल्टर पम्पको साथ सेट, 305 x 76 सेमी, निलो सूचक
लेख संख्या: 56408
साइज: 305 एक्स 76 सेमी; 90% मा भरिएको जल क्षमता: 4.678 लीटर
विरोधी जंग कोटिंग संग ट्यूबलर इस्पात निर्माण; अत्यन्त बलियो तीन-प्लाई सामग्री: ट्रिटेक - पीवीसीपी पलिएस्टर वेब पीवीसी टुकडे टुक्रा
सजिलो र छिटो विधान र समाप्ति; 24 घण्टा /7दिन एक हफ्ते aftersales सेवा
कुल सामग्री: पूल, फ्लोको स्पष्ट फिल्टर पंप (1.249 एल / एच, 16 डब्ल्यू)
इंटेक्स पूल सजिलो सेट पूल, ब्लू, Ø एक्सएनएक्स एक्स 366 सीएमडीप्लेयर
सम्पूर्ण परिवारको लागि रमाईलो पोखरी
अफरमा कुनै सामानहरू समावेश गरिएको छैन
आपूर्ति क्षेत्र: Intex 56930 - 366 x 91 सेमी को बारे मा सजीलो सेट पूल।
Weka ठोस काठ पूल 593 B Gr.1, "सबै समावेशी", incl। टेक्नोलोजी बालुवा फिल्टर प्रणाली मध्यम र प्राविधिक कोठा प्रदर्शन
ऊन सहित पन्नी समर्थन, टेक्निकल कोठा, बालुवा फिल्टर प्रणाली MEDI र भर्या। सहित
पानी क्षमता: 11,4m & sup3;
45mm डबल ग्रू र वसन्तको साथ फड्काहरू
Kessel दबाव impregnated = मौसम संरक्षित
कडा धातु कुना संयुक्त सहित
इंटेक्स 57190NP - सीडब्लु संग पैडलिंग पूल 224 एक्स 216 एक्स 76 सेमी, 590 डिस्प्ले
टिकाऊ vinyl को बने तीन inflatable छल्ले संग पूल।
पूल भित्र वयस्कों को लागि Inflatable सीट।
एक्सएनएनएक्सए एयर च्याबरहरु संग, प्रत्येक मुद्रास्फीति / अपमान को लागि एक वाल्व संग।
पूल किनाराको शीर्षमा दुई बोतल धारकहरू।
अघिल्लो लेखग्याँस ग्रिल
अर्को लेखग्रिल थर्मामीटर